Ukuseta indawo yokuzivocavoca okugqibeleleyo kuthetha ukuba akusafuneki uhlawulele ubulungu bomzimba okanye umntu oqeqesha abantu. Into oyifunayo sisixhobo esifanelekileyo sokusebenza.
Kwaye izixhobo zakho ozikhethayo ziya kwahluka ngokuxhomekeka kwinqanaba lakho lomgangatho kunye neenjongo zomzimba. Ukuzama ukunciphisa umzimba? Unokukhetha ukutshisa iikhalori ngesixhobo se-Cardio njengebhayisekile okanye ibhayisekile emile. Ngaba ufuna ukwenza ithoni yokwakha okanye ukwakha umsipha? Thatha iseti ye-dumbbells kwaye ungene kwinkqubo yoqeqesho lwamandla.
Kwimeko apho ufuna ukuphumla malunga nezibonelelo zokuzilolonga rhoqo: NgokweZiko loLawulo lweSifo kunye noThintelo, inokuphucula impilo yengqondo yakho, ikuncede ukulawula ubunzima bakho, ukunciphisa umngcipheko wesifo sentliziyo, komeleze amathambo akho nemisipha, kwaye kukwenza wonwabe kakhulu.
Nokuba ubeka ivenkile kwigaraji yakho, kwigumbi lakho lokuhlala okanye kwigumbi lakho lokulala - hey, nantoni na esebenzayo! -Nazi izixhobo zekhaya zokuzivocavoca kufuneka udale indlela yakho yokubulala ngaphakathi.